Casa Esposito Comfort & Relax - I-Airbnb
"ICasa Esposito" yindawo ezimeleyo ngokupheleleyo. I-Casale '800, isandula ukulungiswa, izibonakalisa ngokukhawuleza njengendawo yokuhlala enengqalelo enkulu kwiinkcukacha, kunye nefenitshala yoyilo apho uya kufumana zonke izinto ezithuthuzelayo zokwenza ukuhlala kwakho kukhuseleke, kukhululeke kwaye kube lula. Ngoko ke kuya kuba lula kumhambi onomdla kunye nonomdla ukufikelela kwiindawo ezinomdla zembali kunye nembonakalo yomhlaba kwingingqi yaseFlegrean naseParthenopean. Le ndlu inendawo yokupaka egadiweyo.
Indlu ibekwe kwindawo ezolileyo kunye necala lesixeko sasePozzuoli.
Ilungele abo bahamba ngemoto okanye ngesithuthuthu kwaye bafuna indawo ezolileyo nekhuselekileyo yesithuthi sabo.
Imizuzu embalwa ukusuka kumbindi wedolophu, apho kukho imivalo, iindawo zokutyela eziqhelekileyo kunye nokonwabela ubomi basebusuku.
Ukuba ujonga kuphononongo onokuthi ubone ukuba umamkeli wakho uya kuba nakho kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho, unokucela ingcebiso malunga nento omawuyindwendwele kunye nendlela engcono yokufikelela kwiindawo ezinomdla.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pozzuoli